MACLUUMAADKA NOOCYADA EEYAHA EE LOO YAQAAN 'COCK-A-TZU DOG' IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Noocyada eeyaha ee loo yaqaan 'Cock-A-Tzu Dog' iyo Sawirro
Cocker Spaniel / eeyaha Shih Tzu ee la isku daray
Miles Davis the Cock-a-Tzu (Cocker Spaniel / Shih Tzu mix mix dog) waa 1 sano jir iyo 15 rodol— 'Miles wuxuu leeyahay dabeecadda ugu macaan ee meeraha waxaana lagu soo qaatay tababarka dheriga si dhakhso leh. Isagu waa mid xasaasi ah oo ilaalin kara, aad ugu fiican carruurta sidoo kale! Miles wuxuu leeyahay timaha Cocker iyo Shih Tzu oo qaniinyo ku hoos jira. Xaamuusyada sidoo kale waxay leeyihiin dhagaha waaweyn iyo bawdada.
Cock-A-Tzu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Cocker Spaniel iyo Shih-Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Kani waa eeydayda 'Tornado', oo ah Cocker Spaniel iyo Shih Tzu oo isku jira 1 1/2 sano, miisaankiisuna yahay 22 lbs. buuxa.
shaybaarka iyo shar pei mix
'Kani waa Eygayga' Ack-A-Tzu 'oo loo yaqaan' Pippin 'oo jira 12 toddobaad. Isagu waa eey aad u macaan oo dabeecad-dhaban leh oo leh astaan ​​Cocker oo ah inuu kaa daba tago meel kasta oo aad tagtid. Way fududahay in la tababaro — illaa iyo hadda — si deg deg ah ayuu u bartaa amarrada isagoo adeegsanaya guji.
'Snickers waa eey aad u firfircoon oo laga yaabo inuu qayb ka noqdo bakayle. Wuu ka boodi karaa oo ka bixi karaa fadhiga, miiska kafeega, iyo sariirta noo dhow oo dhexda-dheer. Hadafkiisa xigga ee guusha waa inuu ka boodaa oo ka boodaa miiska dushiisa, maadaama uu gaari karo oo keliya cidhifka xilligan, wuxuuna ku riyoodaa saxan hilib doofaar oo ku dul fadhiya xagga sare.
'Snickers waxay jecel yihiin inay la ciyaaraan lafihiisa maqaarka, iyagoo la ciyaaraya walaalkiis Rocky (a Cavalier King Charles eey ), la ciyaarida caruurtayda Cassidy, Maggie, Vaughn iyo Steele, iyo qubaysyo diirran iyo qubaysyo. Wuxuu leeyahay astaamo sida bisad oo kale mararka qaar wuu leefleefi doonaa oo naftiisa nadiifin doonaa, sida walaalkiis Rocky oo kale. '
Snickers the Cock-A-Tzu (Cocker Spaniel / Shih Tzu isku darka eyga)
alaskan malaamute iyo yey isku dhafan
Hannah the Cock-A-Tzu at 1 sano jir
'Hannah oo jirta 11 bilood oo daawashada TV-ga iyada iyo saaxiibkeed ugu fiican, a Bisadda Donskoy Sphynx . Hannah the Cock-A-Tzu ayaa muujineysa in badan oo ka mid ah kooxda 'Cocker Spaniel' oo midabkeedu yahay Shih Tzu. Hooyadeed waa Cocker Spaniel madow aabaheedna waa casaan / caddaan Shih Tzu. Waxay u egtahay midget Cocker Spaniel ama a Cocker Spaniel / Dachshund isku qas laakiin waxaan ka soo helay breed ka ah Kansas oo wata waraaqo si aan u hubsado inay tahay Cock-A-Tzu. Hannah waa sida diva yar oo macaan. Waxay muujineysaa sida ugu wanaagsan ugudambeheeda iyo farxad ay leedahay. Xannaah dharkeeda ma daadiso.
Hannah the Cock-A-Tzu oo ah eey yar oo jirta 6 bilood.
Hannah the Cock-A-Tzu oo ah eey yar oo jirta 10 toddobaad.
Hannah the Cock-A-Tzu iyada oo ah usbuuc 8 jir ah ey tooy .
silig lehba parson Russell Pit
Eeg tusaalooyin badan oo ku saabsan 'Cock-A-Tzu'
Sawirada Co-A-Tzu 1
buur buur ey ey xadka collie mix
toy Pit dawaco isku darka SUNTZU shih
Gordon dhigayo hormuudka isku darka sarkaal oo dahab ah